Naqshad - Decoora | Qurxin
Iyada oo naqshadeynta waxaan ku ogaan doonnaa farshaxanka soo saaridda iyo horumarinta fikradaha daaqada walxaha cusub. Dhamaan walxaha nagu hareeraysan waxay leeyihiin naqshad loo maleynayo hal ama in ka badan ujeedooyin gaar ah. Waan ogaan doonnaa oo aan falanqeyn doonnaa wixii ugu dambeeyay isbeddellada qaran ahaan iyo caalami ahaanba calaamadeeya nashqadda hadda jirta. Khubaradayada ayaa bixin doona tabaha iyo tabaha si aan u noqono naqshadeeyayaal heer sare ah una horumarino fikradaha ugu fiican si gurigeenu u yeesho a naqshadeynta moodada.
Isticmaalka weyn ee microcement ee qurxinta
by Susana godoy samee 1 bishii .
Microcement ee qurxinta waxay noqotay mid ka mid ah jilayaasha ugu muhiimsan. Durba dhowr sano ayaa tan...
Niche, waa curiye qaab dhismeed leh oo dabeecad leh
by Maria vazquez samee Bilaha 2 .
Waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo dhismo ah oo ku dari kara dabeecadda guryaheena, niche waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan...
Xadhig bir ah si aad ugu xidhato jaranjaradaada
by Maria vazquez samee Bilaha 8 .
Salaanka 1. f. Samee tillaabooyinka isku xira laba diyaaradood oo heerar kala duwan ah dhismo ama dhul iyo in...
Fikradaha lagu rinjiyeeyo darbiyada saamaynta asalka ah
Miyaad ka caajistay gidaarada cadcad ee gurigaaga? Ma doonaysaa in aad siiso midab laakiin ma doonayso in aad codad saafi ah ku hadasho?...
Albaabada Qarsoodiga ah: Fikradaha lagu Qarinayo iyaga
by Maria vazquez samee Sannadka 1 .
Waxaan ku aragnay shineemo; albaabada qarsoodiga ah waxay ku guuleysteen inay dhaafaan qolal aan laga warqabin oo ay ...
Aragtida Yin Yang iyo Feng Shui ee guriga ku jira
by Maria Jose Roldan samee 2 sano .
Aragtida Yin-Yang waa mid ka mid ah aragtiyaha ugu waaweyn ee dhammaan iskuulladii fikirka ahaa ee Shiinaha ee qadiimiga ahaa. Daawo dhaqameed ...
6 websaydh naqshadeynta gudaha ah oo aad u baahan doonto inaad ogaato
by Maria vazquez samee 2 sano .
Miyaad dhawaan u guureysaa guri cusub? Ma kiraysatay guri yar oo magaalada ku yaal oo u baahan isbeddel bilic leh? ...
Shaxda midabka RAL: dooro midabkaaga
by Maria vazquez samee 3 sano .
Dhamaanteen waan ognahay shaxda midabka Pantone. Waa nidaamka ugu isticmaalka badan ee qurxinta gudaha, laakiin ...
Sudhan sawirro aan ciddiyaha lahayn
by Maria Jose Roldan samee 3 sano .
Daldalashada sawirradu waa lama huraan u ah qurxinta aqal kasta maxaa yeelay macnaheedu waa labbiska derbiyada si ...
Khadadka cusub ee Ikea: Tom Dixon
Ikea had iyo jeer waxay la timaadaa warar mana ahan wax yar, xarumaheeda waa sida matxafyada qurxinta ee ...
Sida loo casriyeeyo qurxinta guriga caadiga ah, iyada oo aan kharash badan lagu bixin!
2019, meelaha casriga ahi waa isbeddel. Oo maxaa diidaya? Qalalaase yar iyo dareen jinsi ah, guryaha casriga ahi ...
Sariiraha fadhiga ee maanta, raaxo leh oo qurux badan
Faa'iidooyinka albaabada laabanto ee guriga
Fikradaha laga faa'iideysto booska daaqadda hoosteeda
Nalalka saqafka carruurta: Xariifnimo haa, laakiin sidoo kale shaqeynaya
Sanduuqyada boostada ee naqshadeeye